Macallin Kooxda Arsenal ee Unai Emery oo ka hadlay xaaladda Mesut Ozil & Haddii uu laacibku diyaar u yahay kulanka berri ee Liverpool – Gool FM
Haaruun August 23, 2019
(Liverpool) 23 Agoosto 2019. Mesut Ozil ayaa qarka u saaran inuu si lama filaan ah uga soo muuqdo Arsenal xilli ciyaareedkaan kulanka Sabtida tan iyo markii uu si dirqi ah kaga badbaaday weerarkii lagu qaaday Baabuur uu saarnaa.
Kubbad sameeyaha reer Jarmal, kaasoo aan xilli ciyaareedkaan illaa iyo haatan ka soo muuqan kooxdiisa ayaa ku soo laabtay tababarka isbuucaan kaddib markii uu ka soo kabsaday xanuun uu qabay.
Macallinka kooxda Gunners ee Unai Emery ayaa haatan diyaar ah inuu ku daro isaga kooxdiisa uu kala hortagayo Liverpool kulanka habeen dambe ka dhacaya garoonka Anfield.
Ozil ayaa seegay kulankii ugu horreeyey kooxdiisa Arsenal xilli ciyaareedkan, kaasoo ay 1-0 kaga adkaadeen Newcastle, kaddib markii isaga iyo Sead Kolasinac rag middiyo ku hubeysan ay weerareen iyagoo Baabuur saarnaa oo marayey Waqooyiga Magaalada London bishii la soo dhaafay.
Ammaankooda ayaa loo cabsaday, waxaana laga saaray kulankii kooxdooda ay la ciyaartay Newcastle, Ozil ayaana markaas kaddib xanuun ku seegay kulankii ay Gunners 2-1 kaga adkaatay Burnley, laakiin waxa uu isbuucaan ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxdiisa.
Macallin Emery ayaa xaqiijiyey in kooxdu ay baaritaan rasmi ah ka sameyn doonto taam ahaanshaha Ozil maanta oo Jimce ah, laakiin wuxuu yiri: “Waxa uu u baahan yahay inuu taam noqdo, hadda si caadi ah ayuu ula tababartaa kooxda.”
“Taasi waa shaqada ugu horreysa oo ay tahay inuu sameeyo kaddib ayuu innaga na caawin karaa, waxaana isku dayaynaa inaan go’aan kama dambeys ah ka gaarno maanta.”